Bilayska Puntland oo sheegay in ay qabteen nin la dhashay Atam, kana warbixiyay howl-galladii ammaan ee Gaalkacyo. – Radio Daljir
Gaalkacyo, Mar 08 – Taliye-ku-xigeenka ciidamada bilayska Puntland ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen dad lagu tuhun sanyahay falal argagixisanimo, kuwaas oo uu ku jiro nin la dhashay Maxamed Siciid Atam. Taliyaha ayaa arinta ka sheegay shir jaraa?id oo ay maanta isaga iyo maamulka gobolka Mudug si wadajir ah ugu qabteen magaalada Gaalkacyo.
Shirkan jaraa?id oo ay wada-qabteen taliye-xigeenka ciidamada bilayaka Puntland G/lle sare Muxiyadiin Axmed Muuse iyo guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad ayaa loogu talagalay, sida ay mas?uuliyiintu sheegeen, in lagu soo bandhigo natiijooyinka ka soo baxay howl-galladii ammaan ee labaddii todobaad ee ugu dambeeyay ka socday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo guud ahaan meelo kale oo ka mida Puntland.
Taliye-ku-xigeenka Puntland ayaa sheegay in tuulada Alxamdullihi ee gobolka Bari lagu qabtay afar nin oo lagu tuhansan yahay in ay xiriir la leeyihiin arimaha argagixisada kuwaasoo uu ku jiro Cabdishakuur Saciid Maxamed oo ay walaalo yihiin Maxamed Saciid Maxamed oo loo yaqaan Atam, dhawaanna ciidamo uu watay oo dagaal kula jiray dawladda Puntland lagu jabiyay buuraha Galgala ee gobolka Bari.
Taliyuha waxa uu sheegay in eedaysanayaashaa iyo 15 kale oo lagu qabqabtay intii ay socdeen howl-galladii ammaan ee Gaalkacyo labadii todobaad ee la soo dhaafay lagu samayn doono baaritaano dheeraad ah, kadibna la horkeeni doono maxkmad caddaalad ah. Taliyuhu waxa uu tilmaamay in dadka la qab-qabtay ay dhammaantood yihiin kuwo xogtooda la sii hayay, basle waxa uu muujiyay in ay dhici karto in dadka qaar ay yihiin dad aan dambi lahayn, kalmadda ugu dambaysana uu lahaan doono sharciga.
Mudane Muxiyadiin waxa uu dhinaca kalena sheegay in howl-galladii ciidan ee Gaalkacyo ka socday hadday ahaan lahaayeen kuwa la dagaalkanka argagixisada, kan suulinta maandooriyaha iyo kan bilicda magaalada iyo bannaynta xarumaha dawladda intaba lagu guulaystay. Taliyuhu waxa uu mahad ballaaran u soo jeediyay dadwaynaha gobolka Mudug iyo sidii ay gacanta buuxda ee hiilka iyo hoodaba leh ugu garab istaageen ciidamadii fuliyay ammaanka. Waxa uu sheegay in ay dawladdu ka filayso dadwaynaha in ay qayb ka noqdaan qorshaha ilaalinta ammaanka qof walibana uu meeshiisa ku noqdo bilays.
Guddoomiyaha gobolka Mudug oo isagana goobta ka hadlay ayaa ballan-qaaday in howl-gallada lagu sugayo ammaanka ay sii socon doonaan oo ayan ku ekaan doonin inta ay joogaan ma?suuliyiinta ka yimid Garoowe.
Labadii todobaad ee ugu dambeeyay waxaa Gaalkacyo ka socday howl-gal noociisa ah kii ugu ballaarnaa tan iyo dhismihii Puntland, kaasoo lagula dagaalamayay falalka argagixisanimo ee aafeeyay magaalada Gaalkacyo, ganacsiga iyo isticmaalka isa soo tarayay ee noocyada kala duwan ee maandooriyaha iyo bilicda magaalda, sida bannaynta Xero-Dayax, dhismayaasha sharci-darrada loo dagay ama loo dhistay iyo banneeynta waddooyinka la xiray.
Dadwaynaha magaalada Gaalkacyo ayaa si wayn u soo dhaweeyay howl-galkan. Magaalada Gaalkacyo ayay in badan oo falanqeeya arrimaha Puntland waxa ay ku tilmaamaan goob ay adag tahay in uu ka fulo sharicigu.